Njalo inkampani, inhlangano ungumnikazi umkhakha yayo Lesi sigaba kokunye, okuyinto iholwa ikhanda. Futhi njengengxenye yanoma yikuphi inhlangano engokomthetho ukhona umnyango ezimali, okuyinto kuhlobene nayo yonke iminyango. Ngeshwa, hhayi wonke umuntu angakwazi ukukhokhela Amahhovisi abe abasebenzi ngokugcwele Accountants, ukukhonza yonke imikhakha yomsebenzi we zokukhokhelwa ngezimali ekubikeni. Manje accounting uthembeke ngokwanele ukuba inkampani ezikhethekile, okuyinto unomthwalo kokwenza ezimali nemisebenzi zebanga umsebenzi elicacisiwe inkontileka. inkampani Accounting kungaba ngokuphelele, njengoba besho, "ukudonsa" noma ngokuqinile ukwenza imisebenzi ethile, ikakhulukazi, kuphela amasevisi accounting. Futhi izindleko amasevisi ezimali kungase athembele ngokuphelele bomsebenzi kanye nesikhathi-ukudliwa. Yiqiniso, ephelele ezimali amasevisi izinkampani ukalwe ephakeme kunaleyo izabelo kuphela ukulungiswa imibiko.
Ngaphezu kwalokho, schetovodnye inkampani futhi imihlangano yokubonisana. Ngokwesibonelo, kusukela umsebenzi wenhlangano nge e-mail, noma i-Skype mobile iseluleko intela noma yimuphi omunye isiqondiso inganikelwa. Mangisho, ukuhlinzekwa accounting izinsizakalo izinhlangano zama-third party njengamanje ethandwa kakhulu, ikakhulukazi uma kuziwa imisebenzi eyodwa, njengabangane yokubika. Ikhasimende uyala ezimali Imisebenzi eprofetjhinali, ngokuwina isamba ngaleso ithimba accountants. Uma uthatha amasevisi ezimali intengo okuyinto ikakhulu etholakala inhlangano-i khasi lomculi, uzobona mathupha ukuthi umsebenzi nge ezimali okwesikhashana nenzuzo njalo. amasevisi ezimali Okugcwele abiza kakhulu, kodwa ke iklayenti nakanjani ephephile kusuka amaphutha somabhizinisi.
Yini hlobo lwenkonzo sasiyokhonza wena, kwaba yilowo nalowo ngenxa yena uchaza ngokwayo, ukugxila ezidingweni namakhono zezimali. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kungcono ukuqiniseka ukuthi umsebenzi yokukhipha eyiphutha noma wokungasigcini zazo ungase bazohlawuliswa, kuzokwenziwa kahle.